Mudanayaasha Barlamaanka oo maanta ka doodaya Wax ka bedelka Xeerka Bangiga Dhexe – Radio Daljir
Mudanayaasha Barlamaanka oo maanta ka doodaya Wax ka bedelka Xeerka Bangiga Dhexe
Janaayo 14, 2019 7:36 b 0
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta oo Isniin ah kulan yeelanaya, kaddib markii uu baaqday kulankii Sabtidii la soo dhaafay.
Kulanka maanta ayaa waxa ay Xildhibaanada uga doodayaan wax ka bedelka Xeerka Bangiga Dhexe iyo Sharciga Hanti Dhowrka Guud.
Wax ka bedelka Xeerka Bangiga Dhexe ayaa la sheegay inuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee kulanka maadaama, iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay soo xoogeysaneysay warar sheegaya in Guddoomiyaha Bankiga Dhexe loo wado inuu noqdo shaqsi Ajnabi ah.
Xukuumadda iyo Madaxtooyada ayaa si isku mid ah u waday galaangalka ku aadan in shaqsi Ajnabi ah loo magacaabo Guddoomiyaha Bangiga Dhexe, waxaana sanadkii hore xilka Bangiga Dhexe lagu xayeysiisay Wargeys caan ah oo ka faaloota arrimaha dhaqaalaha.
Aqoonyahano Soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa walaac ka muujiyay tallaabada la doonayo in Bankiga Dhexe loogu magacaabo Shaqsi Ajnabi ah.
Madaxweynaha Puntland oo Xilka la wareegaya